[Manokana] Mihombo (naverina indray) ny famoahana ny 'mutants vaovao' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly [Ekena] Mihombo (naverina indray) ny famoahana ny 'mutants vaovao'
[Ekena] Mihombo (naverina indray) ny famoahana ny 'mutants vaovao'
by David N. Grove Aprily 17, 2019
by David N. Grove Aprily 17, 2019 1,543 hevitra
Adinoy izany daty 2 aogositra 2019, daty famotsorana an'i Amerika Avaratra ho an'ny Ny Mutants Vaovao. Ny daty famoahana an'i Ny Mutants Vaovao, izay mifototra amin'ny ekipa Marvel Comics manana anarana mitovy aminy, dia nafindra indray, raha ny loharanom-baovao avy ao amin'ny Fox.
Ny daty famotsorana tany am-boalohany ho an'ny Ny Mutants Vaovao, izay nanomboka naka sary tamin'ny Jolay 2017, dia ny 13 aprily 2018. Nafindra tamin'ny 22 Febroary 2019 izany, talohan'ny nidirany tamin'ny daty farany.
Mbola tsy voafaritra ny daty famotsorana vaovao Ny Mutants Vaovao, hoy ny loharanom-baovao Fox. "Nesorina ilay horonantsary noho ny fikambanan'i Disney-Fox," hoy ny loharanom-baovao. “Te hiandry izy ireo mandra-pahatapitry ny fampiraisana alohan'ny handraisany fanapahan-kevitra momba ny famoahana horonantsary sasany, ao anatin'izany Ny Mutants Vaovao. "
Na dia nanda aza ny loharanom-baovao hilaza na tsia ny daty famoahana na tsia Ny Mutants Vaovao hafindra tanteraka amin'ny taona 2019, toa azo antoka izany, satria i Fox dia voalaza fa mbola mitaky reshoots, izay mbola tsy mandeha. "Ny daty famoahana vaovao dia lavitra ny volana Aogositra," hoy ny loharanom-baovao. "Tsy misy zavatra hafa fantatra amin'izao fotoana izao."
Ny Mutants Vaovao, izay nofaritana ho horonantsary mampihoron-koditra amin'ny karazana maherifo, notarihin'i Josh Boone, izay niara-nanoratra ny sarimihetsika tamin'i Knate Lee ary nampitaha ny sarimihetsika tamin'ny Zazakely Rosemary ary The mamirapiratra.
Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, ary Alice Braga no kintana amin'ilay horonantsary, izay mifantoka amin'ny andiana tanora mutants izay tazonina amina toerana miafina ary mila miady mba hanavotana ny tenany.